ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန် | Myanma Port Authority
အရှေ့တောင်အာရှနှင့် တောင်တရုတ်ဒေသတွင် ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရာအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနှင့် ဘဂလားပင်လယ်အော်အတွင်းပင်လယ်ရေကြောင်း ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများသည် တစ်ပြိုင်တည်းတိုးတင်များပြားလာသဖြင့် ဤစီမံကိန်းသည် ဒေသအတွင်း အလွန်အရေးပါသောကုန်သွယ်မှုဗဟိုအချက် အခြာကျသည့် စီမံကိန်းတစ်ခုအဖြစ် သို့ ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော်တွင် အထူးစီးပွားရေးဇုန်များအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရက်ရန် အတွက် မြန်မာ့အထူးစီးပွားရေးဇုန် ဥပဒေ(Myanma Special Economic Zone Law) နှင့် ထားဝယ် အထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပဒေ(Dawei Special Economic Zone Law) တို့ကို (၂၇-၁-၂၀၁၁) နေ့ တွင် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥပဒေအမှတ်(၈/၂၀၁၁) နှင့် (၁၇/၂၀၁၁) တို့ဖြင့် ပြဌာန်းပေးခဲ့ပါသည်
နိုင်ငံတော်တွင် အထူးစီးပွားရေးဇုန်များအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရက်ရန် အတွက် မြန်မာ့အထူးစီးပွားရေးဇုန် ဥပဒေနှင့် ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပဒေတို့ကိုပြဌါန်းပေးခဲ့ပြီးနောက် ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်ဟု ပြောင်းလဲ သုံးစွဲခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ သဘောတူစာချုပ်အရ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကုန် ပြီးစီးရန် ကနဦးလျာထားချက်
၁။ ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်း (အဆင့် - ၁)
၂။ မြန်မာ-ထိုင်းအဝေးပြေးလမ်းမကြီး(အဆင့် - ၁)
၇။ ဆေးရုံ၊ ကျောင်းနှင့် ဈေးစသည့် လူမှုရေးအဆောက်အအုံများ
အထက်ပါ ကနဦးလျာထားချက် လုပ်ငန်းများကိုConsotiumအဖြစ် ဆောင်ရွက် အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကုမ္ဗဏီ (အီတာလျံ-ထိုင်းကုမ္ဗဏီ) အနေဖြင့် လိုအပ်သည့်ငွေကြေးကို အချိန်မီ ရှာဖွေဖြည့်ဆည်းခြင်း မပြုနိုင်သည့်အတွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို သတ်မှတ်အချိန်ဇယားအတိုင်း အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာခဲ့ပါသည်။
MIE Co., ကဆောင်ရွက်မည့် ကနဦးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ
မူလဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကိုသတ်မှတ်အချိန်ဇယားအတိုင်းအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခြင်းမရှိခြင်းကြောင့် Myanma Industries Estate Co; က Consodium အဖြစ် ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပြီးဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့သောလုပ်ငန်းစဉ် များကိုခြုံငုံနိုင်ရန်နှင့် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းစွာအကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ထားဝယ် အထူးစီးပွားရေးဇုန် စုစုပေါင်း သက်မှတ်ဧရိယာ၏ ၁၈ % ဖြစ်သည့် ၂၇ စတုရန်းကီလိုမီတာခန့်ရှိသောမြေဧရိယာပေါ်တွင် ခြုံငုံဆက်စပ်နိုင်မည့် အောက်ဖော်ပြပါ အချို့ ဆောင်ရွက်လက်စဖြစ်သော လုပ်ငန်းစီမံကိန်း ၉ ခုပါဝင်သည့် Initial Phase Development Project ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ သြဂုန်လ ၅ ရက်နေ့တွင် ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်းစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီနှင့် ITD and Consortium Partners တို့သည် နေပြည်တော်၌ Dawei SEZ Initial Phase Concession Agreement ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးလုပ်ငန်းများဆက်လက် စတင်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။
Dawei SEZ Initial Phase Development Projects
Concession Period: 50 Years plus 25 years extension
1. Two-lane Road, connecting Dawei SEZ with the Thai border
2. Small Port
3. Initial Industrial Estate (consisting of Land Development and Waste Water, WaterDistribution and Power Distribution)
4. Temporary and Boil-off Gas Power Plant
5. Initial Phase Power Plant (CCGT)
6. Small Water Reservoir
7. Telecommunications Landline
8. Initial Township
9. LNG Terminal
• Gas-fired Power Plant for ITD camp and construction use
• Temporary Power Plant)
• Boil – off Gas Power Plant 15 MW
Pa YainByu Reservoir
Workforce Apartment (will be built9building in the 1st Phase)
ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည့် ပင်မစီမံကိန်း (Full Phase Project)
ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံကိန်းအတွက် နိုင်ငံတော် ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးမြေဧရိယာစုစုပေါင်း(၁၉၆ စတုရန်းကီလိုမီတာ) မှ ကနဦးစီမံကိန်းဆောင်ရွက်ပြီးကျန်ရှိသောမြေဧရိယာပေါ်တွင် အထူးစီးပွားရေးဇုန် စက်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သွားရန်ရှိရာမြန်မာ-ဂျပန်-ထိုင်းသုံးနိုင်ငံအစိုးရများ၏ ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းချက်များဖြင့် Tri-lateral အစည်းအဝေးများကိုသုံးကြိမ်ကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံကိုယ်စားပြုသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်သောမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ FERD ၊ ဂျပန်နိုင်ငံဘက်မှ METI နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှ NEDA တို့ကအချိုးကျ အစုရှယ်ယာထည့်ဝင်မှုစာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီး SPV (Dawei SEZ Development CO., Ltd.) အဖြစ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
လက်ရှိအကောင်အထည်ဖော်နေသောကနဦးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအကောင် အထည်ဖော်နေသည့် ခုနှစ်နှစ် တာကာလမပြည့်မီအချိန်အတွင်းမှာပင် အောက်ပါ အထူးစီးပွားရေးဇုန် နှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည် -
၁။ သဘောင်္ကြီး ၁၇ စီးဆိုက်ကပ်နိုင်သောဆိပ်ကမ်းနှင့် သဘေင်0x081ာကျင်းလုပ်ငန်းများပါဝင်သောစီမံကိန်း
၂။ ကနဦးစီမံကိန်းတွင်ပါဝင်သည့် Two Lane Road Link to Boulder ကို အချို့လမ်းအူကြောင်းန ရောကိုပြန်လည်အသုံးပြုပြီး၊ တောင်ရိုးဆက်စပ်ကူးကွန်ကရစ်တံတားလမ်းနှစ်နေရာ ၊ တောင်ဖြတ်ပေါက် ဥမင်လှိုင် လေးနေရာတို့ ပါဝင်သည့် Four Lane Road Link to Boulder အဖြစ်အဆင့်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းစီမံကိန်း
၃။ အဆိုပါလမ်းနှင့်အပြိုင် မီးရထားလမ်း၊ ရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းနှင် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားလိုင်း တို့ပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်း
၄။ စီမံကိန်းဧရိယာတစ်ခုလုံးကိုရေပေးဝေနိုင်သည့် ကလုပ်ထားရေသိုလှောင်ဆည်နှင့် ရေပေးဝေမှုပိုက်လိုင်းစီမံကိန်း
၅။ အဆင့်မြှင့် စက်မှုဇုန်၊ သံမဏိစက်ရုံ၊ ဓါတ်မြေသြဇာစက်ရုံနှင့် အခြားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ
၆။ မြို့ပြနှင့် စီးပွားရေးအချက်အခြာအဆောက်အဦများ
၇။ မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းဒေသများနှင့် အာရှအဝေးပြေးလမ်းမကြီးများနှင့် ဆက်စပ် သောကုန်းတွင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Logestic ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ
Full Phase Project လုပ်ငန်းများအပေါ် လက်ရှိအခြေအနေ
နိုင်ငံတော်အစိုးရအကြီးအကဲများ၏ နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုဆွဲဆောင်ရေးအစီအစဉ်များအရလည်းကောင်း၊ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက် ပြီးဆက်လက်ဆောင်ရွက်လိုသည့် ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များ၏ သဘောထားအရလည်းကောင်း၊ ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်တည်နေရာ၏ ပထဝီ သဘာဝ အခြေအနေကောင်းမွန်မှုများကြောင့်လည်းကောင်း၊ လာမည့် ငါးနှစ်တာကာလအတွင်းပင်မစီမံကိန်း၏ ဖွံ့ဖြိုးမှု လုပ်ငန်းများကို စတင်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည်ဟု မျှော်မှန်းရရှိပါသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလနှင့် ဒီဇင်ဘာလအတွင်ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် Lane Road Link to Boulder ကို JICA လမ်းပညာရှင်များနှင့် တိုင်းတာရေးကျွမ်းကျင် သူများမှ ထိုင်းနိုင်ငံ High Way Department မှ ပညာရှင်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံလမ်းဦးစီးဌာနမှ အင်ဂျင်နီယာများနှင့်အတူကွင်းဆင်းတိုင်တာခြင်း၊ စာရင်းကောက် လေ့လားခြင်းများကိုသုံးကြိမ်တိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။